June 19, 2020 1861
अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको आत्मह’त्याले सबैलाई दुखी बनाएको छ। उनी त यस संसारबाट बिदा भएर गए तर उनीसँग सम्ब’न्धित कैयौं उ’ल्झनहरू बाँकी छन्।
उनको आत्मह’त्यासँगै बलिउडमा परिवार’वादको बहस तीब्र रूपमा फैलिएको छ। यस बारेमा अभिनेत्री कंगना रनावतले सुशान्तको आत्मह’त्या नभइ ह’त्या हो, र यो इन्ड्स्ट्रीले आफुलाई न अपनाएकोले यसो गरेको जिकिर गरेकी छिन्। यससँगै कैयौं नायक नायि’काले फिल्मी क्षेत्रमा हुने परिवारवाद’माथि प्रश्न उठाएका छन् ।
यसैबीच सुशान्तका दाजु नीरज सिहंले आफ्नो भाइले आत्मह’त्या गर्नै नसक्ने दावी गरेका छन । सुशा’न्त सानो मनको मान्छे नभ’एको बताउदै उनले पनि बलिउड इन्ड्स्ट्रीमाथि प्रश्न उठाए । उनका अनुसार बलिउडले सुशान्तलाई लिएर आफू अ’सुरक्षित भएकोले उस’लाई यहाँबाट निकाल्न ष’ड्यन्त्र गरेको दाबी गरेका छन्।
सुशान्तले छोटो सम’यमा धेरै प्रगति गरेको र सो प्रगतिलाई इन्डस्ट्रीले ख’तराको रूपमा लिएको उनको भनाइ छ। राम्रा होइन हाम्रा’लाई मात्र हेरिएको कारण आफ्नो भा’इले यति ठुलो कदम उठाउनु परेको उनले बताएका छन् । नयाँ कलाका’रलाई सौते’लो व्यवहार गरिने र सो व्यवहारको सि’कार भाइ भएको उनको भनाइ छ।
उनको आत्मह’त्याको कारण आर्थिक अभाव नभएको प्रष्ट पार्दै आफूहरू आर्थिक रूपमा ‘सबल भएको र त्यस्तो कुनै समस्या नभएको पनि खुलस्त पारेका छन् । सुशान्तको के’शलाई गहिरिएर छानबिन गर्न पुलि’सलाई आग्रह गरेका छन् साथै भाइको पक्षमा बोलिदिएको भन्दै अभिनेत्री कंगना रनावतलाई पनि धन्य’वाद व्यक्त गरेका छन् । भिडियो हेर्नुहोस….
Prevबाल्यकालमा सजिएको सिउँदो १८ वर्षको कलिलो उमेरमानै पुछियो
Nextआज एकैदिन २१६ जना कोरोना जितेर घर फर्किए, कहाँबाट कति भए डिस्चार्ज ? हेर्नुहोस्
राष्ट्रकविले आफ्नो मृ’त्युपछि बजाउन लेखेको गीत सार्वजनिक (हेर्नुहोस् भिडियो सहित )